Sekureva kwaJony Ive, iyo Apple Watch haisi wachi | Ndinobva mac
Kubva chizvarwa chekutanga cheApple Watch, yaimbonzi iWatch, apo iyo chete ruzivo nezve ichi chishandiso yaive runyerekupe, iyo Apple smart wachi iri kuwedzera nhamba yakakura yemabasa, kuve chizvarwa chechina iyo modhi yakachinja zvakanyanya zvine chekuita nemakwikwi.
Kunyange chiri chokwadi kuti chizvarwa chekutanga cheApple Watch chakatibvumidza kushamwaridzana nezviziviso mukuwedzera pakushandisa odd application, hazvina kuzosvika kuchizvarwa chechipiri, iine Series 2 (kuwedzera kune iyo Series 1) apo mafomu acho paakatanga kuve akanaka zvine mutsindo mukuwedzera pakusanganisira iyo GPS chip.
Iine Series 3, Apple yakatanga vhezheni ine LTE yekubatanidza kuwedzera kuwedzera altimeter uye neiyo Series 4, iyo Cupertino-based kambani yakawedzera electrocardiogram, basa iro parizvino rinongowanikwa muUnited States uye paApple Watch . hapana imwe yemakwikwi yemhando inopa iyi ficha.
Kuona mashandisiro akaita Apple Watch, nkana kuti zvakaoma kufunga kuti iyo Apple Watch haisi wachi chaiyo, asi chave chigadzirwa chinopfuura kupfuura kutipa iyo nguva. Kana isu taive nekusahadzika nezvazvo, mukuru weApple dhizaini, Jony Ive akazvisimbisa mubvunzurudzo naiye Financial Times.
Paakabvunzwa kana iyo Apple Watch ingori wachi, Ive akati:
Kwete, ndinofunga iyi ikomputa ine simba kwazvo, iine maseru eakaomesesa, akasungirirwa paruoko rwangu. Izvo hazvitsanangure kana kubatsira.
Iwe neni tinogovana maonero akafanana uye isu takave nedambudziko rakafanana nechigadzirwa chatinoti iyo iPhone. Zviripachena kugona kweiyo iPhone kunowedzera kupfuura basa rezvataizodaidza kuti foni.
Nezve iyo nyaya yekuti kudzidza kwake kwave kuri imwe ye yekupedzisira kuenda kuApple Park, ndataura kuti:
Izvo hazvina kunonoka, zvakagadziriswa nekudaro Kutamisa vanhu vanopfuura mazana mapfumbamwe, hazviitwe nezuva rimwe. Isu tiri rimwe remapoka ekupedzisira. Icho chiitiko chakapomerwa pamoyo nekuti zvaireva kusiya studio ine makumi emakore enhoroondo, kwatakagadzira nekuvaka ekutanga prototypes. Iyi ndiyo studio yandakadzosa pazuva rakafa Steve. Uye ndiyo nzvimbo yatakawana iyo iPhone nePod.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Sekureva kwaJony Ive, iyo Apple Watch haisi wachi
SimCity: Yakazara Edition, iri kutengeswa kwenguva shoma
Dzokera ku macOS High Sierra kubva ku macOS Mojave